keyboard Archives - Saturngod
Keymagic Developer , Thant Thet is working on iOS5keyboard
Posted on Updated January 31, 2013 January 27, 2012 by saturngod
Good news who waiting keyboard, Keymagic Developer , Thant Thet is working on iOS5keyboard. iOS5new keyboard making is not easy like before. If you want to create new keyboard , you need to do reverse engineering. Thant Thet said : It’ won’t be easy if you don’t have reversing engineering experience […]
Zawgyi iPad Keyboard ( not from cydia )
Posted on Updated July 8, 2011 July 8, 2011 by saturngod
Update: 12:35 AM July 8 Now, you can install from cydia. Forget about that. Package name is Zawgyi Keyboard for iPad. Sorry I try to make install from cydia but deb package haveasome permission problem. If I haveatime, I will try later. Now, you can install manually. Download the package from […]
Zawgyi iPad Keyboard on cydia
Posted on Updated December 4, 2010 December 4, 2010 by saturngod
http://cydia.macforus.com မှာ ဇော်ဂျီ iPad Keyboard ရပါပြီ။ os 4.2 အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ 3.2 အတွက် မရပါ။ Zawgyi Keyboard iPad 4.2 ကို install လုပ်ပါ။ respring လုပ်လိုက်ပါ။ (cydia တွင် respring လို့ ရှာပြီး သွင်းလိုက်လျှင် respring app ရမည်) သို့မဟုတ် restart လုပ်လို့လည်းရပါသည်။ Setting -> Keyboard -> Myanmar ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ keyboard က ကိုဝေဖြိုးလင်းပဲရေးထားတာပါ။
Zawgyi Keyboard iOS 4.1 only (alpha)
Posted on Updated November 26, 2010 November 26, 2010 by saturngod
Alpha version ကို စမ်းသပ်ချင်သူများ အရင်ဆုံး Zawgyi iOS Font package ကို update လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Cydia > Changes > Refersh လုပ်လိုက်ရင် Zawgyi Font iOS အသစ်ဖြစ်နေတာကို တွေ့မှာပါ။ Upgrade လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အောက်က keyboard file ကို download ချပါ။ keyboard Zip ကို ဖြည်လိုက်ရင် file ၈ ခုပါပါတယ်။ အဲဒီ ၈ files ကို /System/Library/Frameworks/UIKit.framework/ ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် restart ချပါ။ ပြန်တက်လာရင် Setting > General > […]
Update Zawgyi keyboard on iPhone/iPodTouch again
Posted on Updated November 21, 2009 by saturngod
ထပ်ပြီး update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ –ျ က နှစ်ခု ထပ်နေတာ မတွေ့လိုက်ဘူး။ ဒီနေ့ လူပျိုကြီး အိမ်သွားမှ လူပျိုကြီး သူငယ်ချင်းက ပြောလို့ သိရတာ။ –ျ –ျ ကို –ျ –ျ လို့ ပြင်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ –ှ ကို ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ မြှ တို့လိုနေရာတွေမှာ သုံးလို့ရအောင်ပါ။ Update လုပ်ပုံကိုတော့ iPhone/iPod Touch Zawgyi Keyboard and Font Package မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ 1.1.2.1 1. –ျ –ျ ဖြစ်နေတာကို –ျ –ျ ပြောင်း။ 2. –ှ ထပ်ဖြည့်။ 1.1.2 1. 123 နေရာတွင် […]
iPhone/iPod Touch Keyboard Update
အခု keyboard ကို ထပ်ပြီး update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ၁၂၃၄ ပါတဲ့ shift ကို 123 နေရာကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ၁၂၃ ကို ဆက်တိုက်ရိုက်မရပဲ shift ကို နှိပ်နှိပ်နေရတာနဲ့ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ 123 နဲ့လဲ ကိုက်သွားအောင်ပေါ့။ ပက်ဆင့်တွေကိုတော့ shift နေရာကိုပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ cydia ကနေ upgrade လုပ်လိုက်ပါအုံးဗျာ။ upgrade လုပ်ပုံက အရင်ကနဲ့ နည်းနည်းကွာသွားတယ်။ ပိုလွယ်သွားပြီး ikeyex ထဲမှာ delete cache လေးနဲ့ cache ကို ဖျက်လိုက်ရုံပါပဲဗျာ။ upgrade ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သေသေချာချာ သိချင်ရင်တော့ iPhone/iPod Touch Zawgyi Keyboard and Font Package […]
Next Level Draft
Posted on Updated November 15, 2009 November 15, 2009 by saturngod
တော်သေးသည်။ အရင် version ကို release မလုပ်လိုက်သည့်အတွက်။ အခုကတော့ အကြမ်းပါ။2level လောက်နဲ့ ရိုက်နေကြ စာအားလုံး ရိုက်နိုင်အောင် စဉ်းစားနေပါတယ်။ zawgyi keyboard သွင်းရင်လည်း အချို့side effect လေးတွေတော့ english keyboard မှာ သက်ရောက်ပါတယ်။ iPhone 3Gs နှင့် iPod Touch 3G တို့တွင်တော့ မသက်ရောက်ဟုထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် iPodTouch 3G မှာတော့ side effect မဖြစ်ပေမယ့် iPhone 3G တွေမှာတော့ အချို့side effect လေးတွေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Zawgyi 2008 Keyboard for Mac
Posted on Updated March 6, 2014 November 5, 2009 by saturngod
Keyboard ကို http://zawgyi-keyboard.googlecode.com/files/ZawgyiMac%20Keyboard.zip မှာ download ချနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတာကိုတော့ http://code.google.com/p/zawgyi-keyboard/wiki/InstallZawgyi2008MacKeyboard မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။